Resaka politika sa asan-jiolahy? : norasarasain’ny jiolahy ny antsy tao an-tranony Rah Ckiky | NewsMada
Resaka politika sa asan-jiolahy? : norasarasain’ny jiolahy ny antsy tao an-tranony Rah Ckiky
Par Taratra sur 02/10/2017
Niharan’ny herisetran-jiolahy nitondra antsy tao an-tranony ao Tsarahonenana Betainomby Toamasina, omaly maraina Rah Ckiky. Mbola tao anatin’ny torimaso izy sy ny vady aman-janany no tonga ireo olon-dratsy. Norasarasain’ireo jiolahy ny antsy izy ka naratra mafy tsy nahatsiaro tena…
Niditra an-keriny tao an-tranony ny jiolahy roa nitondra antsibe omaly tamin’ny 2 ora sy 45 mn. Raha ny fitantaran’i Diane Françoise vadin-dRah Ckiky, tsy naheno na inona na inona mihitsy izy mivady tamin’io fotoana io fa renoky ny torimaso. Ny vadiko efa miantso vonjeo vao taitra aho ka hitako avy hatrany ireo roa lahy mandrasarasa antsy eo am-pandriana. “Lasa nitsoaka izy ireo raha vao taitra aho ary tsy naka na inona na inona tao an-tokantranonay”, hoy hatrany ny fitantaran’ny vadiny.
Teo amin’ny tamboho misy ny tranon’akoho eo an-tokotany no niditra ireo olon-dratsy tamin’io fotoana io. Misy jiro ihany eo an-tokotany saingy mitodika mankany amin’ny tranon’akoho ka mora ho azy ireo ny niditra tao an-trano, araka ny fanazavana hatrany.
Naratra mafy ity mpanakanto malaza ity ka nentina haingana ao amin’ny Hopitalibe Toamasina. Hatramin’ny omaly hariva, tsy atahorana ny ainy, saingy mbola tsy nahatsiaro tena kosa izy, araka ny fampitam-baovao avy any Toamasina.
Hatreto aloha tsy fantatra mazava izay anton’izao na tsy fandriampahalemana mahazo vahana ao Toamasina na resaka politika maloto amin’izao fotoana izao.
Isan’ny nanamarika ity mpanakanto malaza ity ny namoronany ilay hira hoe “Vonjeo i Soamahamanina”. Fantatra tamin’ny alalan’ny loharanom-baovao marim-pototra fa nahazo fandrahonana Rah Ckiky ny herinandro lasa teo mba hisintona io hira io, saingy tsy nanaiky izany mihitsy ity mpanakanto ity na notambazana vola aza. Ahin’ny rehetra ho misy ifandraisany amin’izany ity raharaha ity. Ny valin’ny fanadihadiana anefa no hamantarana ny marina rehetra momba ity asan-jiolahy nihatra tamin-dRah Ckiky ity.